RAHARAHA BIOMETRIKA : Nilatsaka hofidiana ireo mpisoloky roa tompon-kevitra
Roa amin’ireo tompon’ andraikitra tamin’ny fametrahana sy fanamboarana ireny fahazoan-dalana mamily fiara biometrika, sy ‘carte grise” biometrika ireny no fantatra fa milatsaka hofidiana ho Filoham-pirenena ankehitriny. 5 octobre 2018
Mpandraharaha ny iray ary tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena kosa ny faharoa. Anisany tokony hanadinana azy ireo ity raharaha ity satria sady very fotoana ireo namadika ny azy ho biometrika, indrindra ireo tao an-drenivohitra no very vola ihany koa. Nisy mantsy ny filazana fa ho avy ny tena “permis” sy “carte grise” biometrika ka tokony mamadika izany indray ny rehetra… Midika izany fa sandoka ireo taloha nefa dia ny fanjakana no nanao azy ary noterena mihitsy ny fanovana izany ho biometrika.
Lafo dia lafo ny fanovana ireo taratasy ireo ho biometrika. Fisolokiana ny vahoaka Malagasy ireo lazaina fa « permis » sy « cartes grises » biometrika ireo. Volana maromaro izay dia Malagasy monina any ivelany no nanao fanairana fa tsy eken’ny tompon’andraikitra any amin’ny toerana ipetrahany ny fahazoan-dalana mamily biometrika avy eto amintsika. Mbola eken’izy ireo koa aza ilay fahazoan-dalana mamily fiarakodia taratasy mavokely miforitra telo iny.
Rehefa jerena amin’ny fitaovana mpamaky izany tokoa mantsy dia tsy misy soratra na ‘données’ avoakany fa maintimainty be fotsiny. Teo dia mailo ny rehetra ka izay manana fitaovana mpamaky ireny na ‘logiciels’ dia niezaka namaky ny azy avokoa ary dia nanamarina avokoa fa tsy misy ninoninona mivoaka. Rehefa nanomboka nampiaka-peo ny mpanjifa dia nisy tompon’ andraikitra niakatra tamin’ny fahitalavitra mbola nanamafy fa tena izy io, mandeha tsara ary manana fitaovana mamaky izany izy ireo.
Tompon’andraikitra moa no niteny ka dia natoky indray ny vahoaka, na dia nimenomenona aza satria dia niniana nohasarotina ny fahazoana azy io. Intelo milahatra manomboka amin’ny telo maraina ny sasany vao vita ny fakana ny mombamomba azy sy ny fandoavam-bola. Avy eo mbola arirarira ihany koa fa misy volana maro mbola tsy azo ilay plastika. Hatramin’izao aza moa dia mbola misy ny tsy nahazo ny azy. Lasa nisy kolikoly manodidina ny fakana azy ireo noho ny dingana sady ela no nohasarotina, ka nahatonga ny Bianco nirotsaka an-tsehatra. Volabe tsy toko tsy forohana no azon’ireo nanao izany, an-jato tapitrisa maro araka ny tarehimarika heno teny Ambohidahy sy mandehandeha eny amin’ireo tambajotran-tserasera. Ankehitriny anefa dia milatsaka hofidiana ireo olona nanao izany fitaka sy fanambakana izany. Nefa dia tena tafiditra amin’ny fanambakana avo lenta noho izy ny fanjakana mihitsy no voarohirohy. Ho hita eo ny tohiny
2018-10-05 14:24:47 par Brandon
Fa tena mihevitra izy roalahy fa tain-dramanavy ny vahoaka malagasy.
Tamin’ny fotoan’androny, dia 600 000 permis teo ho eo teto Tanà. 10% ohatra tsy nohavaozina noho ny antony maro (fahafatesana, fahanterana, tsy fanana vola, ...). Nampiditra vola 540 000 x 38 000 = 20 520 000 000 Ariary ry zalahy. Ilay permis sandoka dia mora be any Slovénie. Tsy misy droits de douane eo am-pidirana. Dia i Celtis Madagascar no mpanelanelana manao ny facturation sandoka mba hahafahana mizara ny tombony.
Tsy mendrika ary tsy azo atao filohan’y Repoblika ireo olona ireo.